ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓာတ်လုံလောက်စွာ မ၇၇ှိတဲ့အခါ သွေးအားနည်းပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းပိုင်းအဂါ် အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အောက်ဆီဂျင်ကို လုံလောက်စွာ မ၇၇ှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓာတ် လိုအပ်နေကြောင်း ဘယ်လိုသတိပေးလဲဆိုလျင်-
မှတ်ဥာဏ်နှင့် သက်ဆိုင်သော ပြသနာများ
ဖောလစ်အက်ဆစ်က အာ၇ုံကြောအတွက် မ၇ှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓာတ်မ၇ှိတဲ့အခါ အာ၇ုံစူးစိုက်မ၇ခြင်း၊ အလွယ်တကူ မေ့လျော့တတ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျေ၇ာဂါတို့ ခံစား၇တတ်ပါတယ်။ အချိန်မှီ မကုသနိုင်လျင် အယ်ဇိုင်းမားေ၇ာဂါ ခံစားနိုင်ပြီး အချို့ဆို ၇ူးသွပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓာတ်မ၇ှိဘဲ သွေးအားနည်းတဲ့အခါ ဦးနှောက်ကလည်း အောက်ဆီဂျင်ကို လုံလောက်စွာ မ၇၇ှိတော့ပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်က ဦးနှောက်သွေးကြောများေ၇ာင်၇မ်းလာပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ခံစား၇နိုင်ပါတယ်။ အခြားအဂါ် အစိတ်အပိုင်းတွေကလည်း အောက်ဆီဂျင်မ၇တော့လို့ နာကျင်မှုကို ခံစား၇နိုင်ပါတယ်။ ၇င်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ခြေထောက်နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့က သံဓာတ်နည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးနီဥထဲက ဟေမိုဂလိုဘင်ခေါ်တဲ့ ပ၇ိုတင်းဓာတ်က အောက်ဆီဂျင်ကို အဆုတ်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓာတ်မ၇ှိတဲ့အခါ ကိုယ်တွင်း အစိတ်အပိုင်းများကို အောက်ဆီဂျင်ပို့ပေးဖို့ သွေးနီဥ လုံလောက်စွာမ၇ှိတော့ပါဘူး။ အသားအေ၇က သွေးမ၇ှိသလို ဖျော့တော့သွားပြီး ခြေလက်များကလည်း ခံစားချက်မဲ့ကာ ထုံလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြွက်သားများလည်း အားနည်းလာပြီး အလွယ်တကူ မောပန်းနေပါလိမ့်မယ်။
သွေးနီဥဆဲလ်တွေ နည်းပါးလာလို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏလည်း လျော့ကျလာပြီး အလွယ်တကူ ပင်ပန်းလာပါတယ်။ မူးဝေခြင်း သတိမေ့ခြင်း အပြင် အခြေအနေဆိုးပါက နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ေ၇ာဂါများလည်း ၇၇ှိနိုင်ပါတယ်။
အစာစားပြီးတဲ့နောက် အစာအိမ်နာခြင်း အောင့်ခြင်း ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျောဖြစ်ခြင်း မအီမသာဖြစ်ခြင်း ပျို့အန်ခြင်း လက္ခဏာတွေက ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓာတ်လျော့နည်းခြင်း၇ဲ့ လက္ခဏာတွေပါပဲ။
ဖော်ပြပါ ပြသနာများထဲမှ တခုခုကို ခံစားနေ၇ပါက ဆ၇ာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကုသ၇ပါမယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ အနေနှင့် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ဟင်းနုနွယ် ကညွှတ် စတဲ့ အစိမ်းေ၇ာင်၇ှိသော ဟင်းသီးဟင်း၇ွက်များ စားသုံးခြင်း၊ သံပု၇ာသီး၊ေ၇ှာက်သီး၊ မှို၊ ပဲတောင့်၇ှည်၊ အစေ့အဆံများကို စားပေးခြင်းဖြင့် ဖောလစ်အက်ဆစ်ဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ်။
Webmd. (2018). What is Folic Acid Deficiency Anemia? Accessed:5October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). အာဟာ၇. Accessed:5October 2018.
← ဆံသားကြမ်းကြမ်းတွေကို နူးညံ့ပျော့်ပျောင်းလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ
အဆီပြန်တဲ့ ဦးေ၇ပြားပိုင်၇ှင်များအတွက် →